मेरो धरहरा कसले बनाउने भो ?
मेरो धरहरा मै बनाउँछु भनेर झ्याली पिट्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो कार्यकालमै घोषणा गरेर अर्थ संकलनको सुरुआत पनि गरेका हुन् । त्यसपछि नेपाल टेलिकम अघि सर्‍यो, चुनावबाट आएको महानगरकका मेयर विद्या सुन्दर शाक्य पनि अघि सरका थिए, सबै धमाधम सेलाए । मेरो धरहरा मै बनाउँछु भन्ने अभियान ठेक्कापट्टातिर धकेलिएको छ । ठेक्का दिएपछि कमिशन खान पाइनेभो, अरु शुभलाभहरु लिन पाइनेभो, भ्रष्टाचारी चरित्रले काम गरेपछि धरहराको काम पछि धकेलियो ।
के हो धरहरा ?
रानी ललित त्रिपुरासुन्दरीको निर्देशनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री (मुख्तियार) भीमसेन थापाले २ सय ३ फिट अग्लो १८३२ मा निर्माण गरेपछि धरहराको खास नाम भीमसेन स्तम्भ भएको हो । तर सयवर्षपछि १९३४ को भूकम्प अर्थात ९० सालको भूकम्पले धरहरा क्षतिग्रस्त भयो । जुद्धशमशेरको हुकुममा धरहराको जिर्णोद्वार गरियो ।
२०७२ सालको भूकम्पले भीमसेन स्तम्भ यसरी भाँच्चियो कि ६० जनाको ज्यानसमेत लियो । प्रकृतिको खेल, कसलाई के थाहा छ र ? भयो यस्तै ।
अहिले विद्या भण्डारी राष्ट्राध्यक्ष छिन् र केपी ओली प्रधानमन्त्री । यिनै दुईको निर्णयमा धरहरा पुनर्निर्माण कार्य हुनेछ । यसका लागि ठेक्का आह्वान गर्दा ६ कम्पनी नेपाली र ६ कम्पनी विदेशी कम्पनी धरहरा निर्माणको ठेक्का लिन तम्सिएका छन्, सुनिन्छ, यसमा पनि कमिनको लेनदेनको कुरा भित्रभित्रै भइरहेको छ ।
नेपाली र चिनियाँको साझेदारीमा निर्माण हुने धरहराका बारेमा सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखाले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार २२ तले धरहरा निर्माणका लागि परेको ठेक्काको निर्णय गरी असार मसान्तमा प्रधानमन्त्रीबाट शिलान्यास गरेर निर्माण अघि बढाइने तारतम्य मिलाइदैछ ।
पहिले विध्वंश अनि निर्माण गर्ने नीति कम्युनिष्टको छ भनिन्छ । नेपालको राजनीतिक र ऐतिहासिक महत्व तथा पुरातात्विक सम्पदा क्षेत्रमा जनयुद्धले गर्नुसम्मको क्षति गरिसकेको छ । त्यो विध्वंशकारी शक्तिसमेत यो सरकारमा सामेल भएको छ र नेकपा निर्माण गरेर नेपालको नयाँ इतिहास निर्माण गर्नतिर लागेका छन् । जनताले यिनलाई साथ पनि दिएका छन् र जनताको साथलाई लात मारेर कमरेड कमरेड मुठ्ठी बटार्दै अघि बढ्ने हुन् कि देशको गौरवको जगेर्नामा पनि ध्यान दिने हुन्, अहिले नै स्पष्ट भन्न सकिन्न । जब जनयुद्धकालीन फौजदारी मुद्दामा समेत माफी दिने काम सुरु गरेको छ नेकपाले, त्यसपछि केही आशंकाहरु भने पक्कै बढेका छन् ।
अव प्रश्न धरहराको मात्र छैन, प्रश्न देशको शिरको पनि प्रश्न छ । धरहरा बन्दैमा देश बन्ने होइन । धरहराजसरी विगतमा ध्वस्त पारिएका संरचनाहरु, गौरवहरु ठडिनुपर्छ र खासगरेर नेकपाका नेताहरुमा नैतिक मूल्य र मान्यता सगरमाथाजसरी उठ्नुपर्छ । नैतिकता उठेन र धरहरामात्र बन्नु देश बन्नु होइन । देशको सिरोभारो नेकपाका नेताहरुको हातमा छ । कमाण्ड पनि यिनके हातमा छ । प्रतिपक्ष साह्रै कमजोर भएको बेलामा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति बढ्यो भने अहिलेको यो कम्युनिष्ट शासन ५ वर्ष त चल्ला, त्यसपछि के होला, के नहोला ?